Winamp, umdlali wemultimedia ye-Android uyaphuculwa | I-Androidsis
I-Winamp 1.3 ngophuculo kunye neendaba kwi-Android
WinampEsona sidlali semultimedia sigqwesileyo kuwo onke amaqonga afumanekayo, iyaqhubeka ukuphucula, kwaye ukuba uhlaziyo olutsha kwiinguqulelo zeWindows kunye neMac lusungulwe kutshanje, ngoku ibilithuba lokugqibela Uhlobo "oluncinci" lwe-Android esele sithethile ngaphambili.
I-Winamp 1.3 ye-Android iza notshintsho olwahlukileyo, enye yezona zinto zibalaseleyo kukumiliselwa kwevenkile yedijithali ngaphakathi konxibelelwano olufanayo, kwaye apho kunokwenzeka khona ukuba uthenge izongezo ezahlukeneyo kunye neeplagi yandisa ukusebenza komdlali.
Enye yezi zinto sele zongezwa kwivenkile entsha ngu «I-albhamu yomsuki weengubo«, Yeyiphi, ngexabiso leedola i-0.99 yeedola (kangangexesha elilinganiselweyo), ophetheyo ekuphuculeni ilayibrari yethu ngokulungisa ulwazi kunye neelebhile zeefayile zomculo, ukongeza ekubeni nako ukukhuphela ngokuzenzekelayo amaqweqwe alahlekileyo eialbham zethu .
Phakathi kwezinye izinto ezinqabileyo esinokuzifumana xa sihlaziya, ukhetho luye lwasivumela ukuba sihambise usetyenziso Imemori khadi ye-SD, eluncedo kakhulu kwabo banendawo encinci yokugcina ngaphakathi kwifowuni. Kwangokunjalo, injini yokukhangela kwizikhululo zikanomathotholo ze-intanethi sele iphunyeziwe, inkqubo yokwazisa iphuculwe, uyilo lomdibaniso luye lwenziwa kwaye ekugqibeleni ukudlalwa kweefayile zomculo kwifomathi ye-ALAC kuvunyelwe, nangona ewe, le yokugqibela ithenga iphakheji ye-Pro.
Kwelinye icala, olu hlaziyo lusetyenziswe ngabaphuhlisi balo ukulungisa iimpazamo ezahlukeneyo kunye neengxaki ezichaphazele iinguqulelo zangaphambili, ngakumbi ngakumbi inkxaso yezixhobo Isandwich yeCream CreamKe ngoko, ngaphandle kokuba nohlobo lwamva nje lwe-Android, kuyacetyiswa kakhulu ukuba uhlaziye ukuze ufumane ukusebenza okungcono.
Ulwazi oluthe kratya-I-beta entsha yeWinamp ye-Android
Umthombo -Winamp 1.3 kuGoogle Play
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » I-Winamp 1.3 ngophuculo kunye neendaba kwi-Android
ukhe wa sitsho
Kuya kufuneka sikhuphele le nguqulo intsha ukuze ndibone ukuba yintoni, bendinayo inguqulelo pro kodwa ndikhethe i-playerpro kuba ujongano lulumkile